Instagram က ဓာတ်ပုံတွေကို ဘယ်လို Download လုပ်မလဲ (Android) – DigitalTimes.com.mm
Instagram က ဓာတ်ပုံတွေကို ဘယ်လို Download လုပ်မလဲ (Android)
admin Jun 09, 2018
Instagram မှာ ဓာတ်ပုံတွေကို Download (or) Save လုပ်ဖို့အတွက် Option ထည့်သွင်း ပေးမထားပါဘူး။ ဒီတော့ မိမိ လိုချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို Download လုပ်ဖို့အတွက် Third-party Software တစ်ခုခုကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပထမ နည်းလမ်းကတော့ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းတွေမှာ ထည့်သွင်းပြီးသား ဖြစ်တဲ့ Browser ကို အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁. ပထမဦးစွာ မိမိ လိုချင်တဲ့ ပုံကို ရှာပါ။ ပြီးလျှင် အပေါ်ဘက်ထောင့်က ဒေါင်လိုက်တန်းထားတဲ့ အစက် ကလေး ၃ စက်ကို နှိပ်ပါ။
၂. Copy Link ကို နှိပ်ပါ။
၃. www.downloadgram.com သို့ သွားပါ။ မိမိ Copy ကူးခဲ့တဲ့ ပုံကို Paste ချပါ။
၄.Download ကို နှိပ်ပါ။ Download image ကို ထပ်နှိပ်ပါ။
Instagram ကနေ Copy ကူးခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း ဒီနည်းအတိုင်း Download လုပ်လို့ ရပါတယ်။
ဒုတိယ နည်းလမ်းကတော့ FastSave for Instagram ကို Play Store ကနေ Download လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁.Download လုပ်ပြီး သွားပြီ ဆိုရင် FastSave application ထဲ ဝင်ပြီး FastSave Service ကို ဖွင့်ပေးပါ။
၂.Open Instagram ကို နှိပ်ပါ။ Instagram ထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
၃.မိမိ လိုချင်တဲ့ ပုံ တွေ့ပါက အစက် ၃ သုံးစက်ကို နှိပ်ပြီး Copy Link ကို နှိပ်ပါ။
Copy Link ကို နှိပ်ပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် FastSave application က အော်တိုမက်တစ် Download လုပ်သွားပါလိမ့်မယ့်။ ကျွန်တော်တို့ Copy Link လုပ်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေဟာ Gallery ထဲက InstaSave Folder ထဲမှာ ရောက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
Instagram က ဓာတျပုံတှကေို ဘယျလို Download လုပျမလဲ
Instagram မှာ ဓာတျပုံတှကေို Download (or) Save လုပျဖို့အတှကျ Option ထညျ့သှငျး ပေးမထားပါဘူး။ ဒီတော့ မိမိ လိုခငျြတဲ့ ဓာတျပုံတှကေို Download လုပျဖို့အတှကျ Third-party Software တဈခုခုကို အသုံးပွုဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ပထမ နညျးလမျးကတော့ ခငျဗြားတို့ ကြှနျတျောတို့ ဖုနျးတှမှော ထညျ့သှငျးပွီးသား ဖွဈတဲ့ Browser ကို အသုံးပွုမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁. ပထမဦးစှာ မိမိ လိုခငျြတဲ့ ပုံကို ရှာပါ။ ပွီးလြှငျ အပျေါဘကျထောငျ့က ဒေါငျလိုကျတနျးထားတဲ့ အစကျ ကလေး ၃ စကျကို နှိပျပါ။
၂. Copy Link ကို နှိပျပါ။
၃. www.downloadgram.com သို့ သှားပါ။ မိမိ Copy ကူးခဲ့တဲ့ ပုံကို Paste ခပြါ။
၄.Download ကို နှိပျပါ။ Download image ကို ထပျနှိပျပါ။
Instagram ကနေ Copy ကူးခဲ့တဲ့ ဓာတျပုံဟာ ကြှနျတျောတို့ ဖုနျးထဲကို ရောကျသှားပါလိမျ့မယျ။ ဗီဒီယိုတှကေိုလညျး ဒီနညျးအတိုငျး Download လုပျလို့ ရပါတယျ။
ဒုတိယ နညျးလမျးကတော့ FastSave for Instagram ကို Play Store ကနေ Download လုပျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁.Download လုပျပွီး သှားပွီ ဆိုရငျ FastSave application ထဲ ဝငျပွီး FastSave Service ကို ဖှငျ့ပေးပါ။
၂.Open Instagram ကို နှိပျပါ။ Instagram ထဲကို ရောကျသှားပါလိမျ့မယျ။
၃.မိမိ လိုခငျြတဲ့ ပုံ တှပေ့ါက အစကျ ၃ သုံးစကျကို နှိပျပွီး Copy Link ကို နှိပျပါ။
Copy Link ကို နှိပျပွီးတာနဲ့ တပွိုငျနကျ FastSave application က အျောတိုမကျတဈ Download လုပျသှားပါလိမျ့မယျ့။ ကြှနျတျောတို့ Copy Link လုပျခဲ့တဲ့ ပုံတှဟော Gallery ထဲက InstaSave Folder ထဲမှာ ရောကျရှိနပေါလိမျ့မယျ။
ဒီနှစ် Windows PC တွေအတွက် Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 850
Facebook က Game Broadcast Channel ကို စမ်းသပ်နေ